Iibhisikidi kunye neeKuki zeFektri-China iiBhisikidi kunye neeKuki zeeKhukhi abavelisi, abaXhasi
Iibhiskithi kunye neeKuki
Ipeyinti eMthubi enkonkxiweyo kwiTini
Iziqhamo ezinziweyo kwiTin
VF imifuno kunye neziqhamo
Iibhiskithi ezijikelezayo zemifuno
Iibhiskithi zesidlo sakusasa
Ibhotolo yamandongomane 210g
Amanqana e-mandarin e-gatin kwiJar Jar
Ipesika eMthubi enkonkxiweyo kwiJar Jar
Iindonga zeBhontshisi eziMnyama ezomileyo
IiSpredishithi zeBean ezomileyo
Iipilisi zeetapile ezibhakiweyo
Ikhekhe lenyanga yimveliso yokubhaka yaseTshayina ngokwesiko eyatyiwa ngexesha loMnyhadala waMaphakathi-Ekwindla. Umnyhadala ungokubonga kwenyanga kunye nokubukela iNyanga, kwaye iikeyiki zenyanga zithathwa njengezona zibalulekileyo. Iikeyiki zenyanga zinikezelwa phakathi kwabahlobo okanye kwindibano yosapho ngelixa ubhiyozela umthendeleko.
Sinokukunika iintlobo ezininzi zeekeyiki zenyanga, ezinjengee-kernels zekhekhe zenyanga ezintlanu, iqanda lekhekhe lenyanga, iqebengwana lekeyiki yenyanga, ikhekhe lembotyi lokuncamathisela inyanga, ikhekhe yenyanga yesitayile seCanton, njl.
Ioyile yeSesame, yincasa yemveli yemifuno e-China. Icatshulwe kwimbewu yesesame kwaye inencasa eyomeleleyo yesesame yokuqhotsa. Ioli yeSesame inomdla ococekileyo kunye nexesha elide. Lixabiso elibalulekileyo ebomini bemihla ngemihla. Ngaphandle kokuba isetyenziswe njengeoyile yokupheka, isetyenziswa njengesinongo sevumba kwiindawo ezininzi zokutya, inevumba elimnandi lencindi kunye nencasa. Nokuba sisitya esibandayo, eshushu okanye isuphu, kunokubizwa ngokuba kukubetha kwelanga
Ibhisikidi yethu ejikelezileyo yemifuno yenziwa ngomgubo we-organic ogqityiweyo, owenziwe ngomhlaba okhethwe ngononophelo ingqolowa yase-Australia, kunye nemifuno emininzi yezondlo. Ngezixhobo zokuqhubekeka phambili kunye nobuchwephesha obugqwesileyo be-oyile enebhasikithi enzima, iphantsi kumanqatha kwaye iphezulu kwi-calcium kunye nefomathi yesondlo izinto ezingafunekiyo.It isityebi kwizinto ezahlukeneyo ezifunwa ngumzimba womntu. Abathengi batsalwa ngumbala wayo omkhulu, ukunambitheka kunye nemifuno. Kwaye kulula ukuyiphatha kwaye uyigcinele iphakheji yayo encinci kwaye intle. Kwaye sinako ukuphuhlisa iincasa ezahlukeneyo zolu ngcelele ngokweemfuno zabathengi kunye neemarike.
TI-biscuit yakhe ecekeceke, okanye iqhekeza, ngomnye wabathengisi bethu ababalaseleyo kule minyaka ngexabiso elinokhuphiswano, elilungele ukutshintshwa kwesidlo sakusasa, ixesha lekhefu leofisi, inkampu, izihlobo ezihlanganayo.
Ulawulo olungqongqo luphunyezwa kwinkqubo nganye, ukusuka kuthengiso lwempahla eluhlaza, ukuvavanywa kunye nokuvavanywa komgangatho ukuqinisekisa ukuba imveliso iyahlangabezana nokuthotyelwa kunye nemigaqo efanelekileyo, kunye neemfuno zabathengi.
Iibhotolo zeBhotolo kunye neCheese
Iibhotolo zethu zeBhisikidi kunye neCheese zenziwe ngomgubo we-premium, owenziwe ngumqolo okhethwe ngononophelo wase-Australia kunye nebhotolo yeZelanian. Ngezixhobo zokuqhubekeka phambili kunye nobuchwephesha obugqibeleleyo, ityibilika kwaye inevumba lesonka samasi. Abathengi banomdla kwiipakeji zayo ezinemfashini kwaye banokwabelana nabahlobo xa benamatheko okanye kuhambo kunye.
Iibhotile zebhotela zihlala zaziwa ngokuba zii-cookies zase-Danish, ezisetyenziselwa ixesha leKrisimesi. I-Cookie yethu ye-Butter yenziwe ngezinto zepremiyamu eluhlaza kunye nebhotolo. Kubhakwe ngetekhnoloji yendabuko kunye neefomula, ezenza ukuba incasa ecocekileyo, ecekeceke, egudileyo kwaye emnandi. Icandelo ngalinye linombala wegolide ogqibeleleyo. Sinokongeza iyogathi, ubisi kunye netshokholethi ngokwezicelo ezahlukeneyo zabathengi zokwenza ii-cookies ezahlukeneyo. Isenokuba sisipho esihle seKrisimesi, usuku lokuzalwa okanye isikhumbuzo, njl.
Iibhasikiti zeCalcium Milk
PUhlobo lwemveliso: Ibhiskithi enzima
Izithako: Ingqolowa, iswekile, ioyile yamandongomane, iqanda elitsha, umgubo wobisi, izongezo zokutya (i-sodium hydrogen carbonate, i-ammonium hydrogen carbonate, isodiyam metabisulphite), calcium carbonate.
Nencasa: I-Biscuit yoqobo / yeCalcium-Milk yabantu abadala
Specification: 54g * 80 iingxowa / CTN
225g * 24 iingxowa / CTN
Package: Iingxowa zangaphakathi, iibhokisi zangaphandle. (Iibhokisi ezili-1000 nge-20 GP container.)
Beka ubomi kwishelufa: Iinyanga ezi-8
Ukugcina: indawo epholileyo neyomileyo，thintela ubushushu obuphezulu，Ukukhanya kwelanga okanye iindawo ezinomswakama.
CukufunyanwaI-HACCP, ISO9001: 2015, ISO22000: 2005
Ezi alfabhethi / iibhisikidi ezimilise izilwanyana ziya kuba ziinkumbulo ezilungileyo kubuntwana bakho. Babeza kufunda ulwazi olusisiseko ngokuzonwabisa ngeebhiskithi ezimnandi. Iimveliso zeXabiso eliKhulu zibonelela iintsapho ngexabiso eliphantsi, ukutya okusemgangathweni kunye nezinto onokuzisebenzisa ekhaya. Uluhlu lwethu olubanzi lweendidi zemveliso, sikunika iintlobo ngeentlobo zeemveliso kwiimfuno zentengiso yakho.
Ibhisikidi yabantwana kwitoti
Izithako: Umgubo wengqolowa, iswekile eyenziwe ngetyuwa, I-oyile yamandongomane, ioyile yamasundu, amaqanda amatsha, Ubisi olungumgubo, i-Ammonium Bicarbonate, iSodium Bicarbonate, iSodium Metabisulfite, iCalcium Carbonate, iNiacin, iZinc Gluconate, isodium ferric ethylenediamine tetrarate, isiseko esidliwayo.
Nencasa: Yoqobo / Ithanga / Iminqathe
Specification: Iitoti ezingama-80g * ezili-12 / i-CTN
Package: Iinkonkxa zangaphakathi, iibhokisi zangaphandle. (Iibhokisi ezili-1200 kwityesi ye-GP engama-20 nganye.)
Ukugcina: indawo epholileyo neyomileyo，thintela ilanga elithe ngqo.
Izithako: umgubo wengqolowa, ioyile yesundu, ingqolowa yengqolowa etyiwayo, izongezo zokutya (ulwelo lwe-maltitol, i-xylitol 5%, i-ammonium bicarbonate, i-sodium bicarbonate), ulwelo lweqanda lonke, isesame, isitatshi sengqolowa esidliwayo, i-oatmeal, ityuwa etyiwayo.
PUhlobo lwemveliso: Ibhisikidi ecekeceke
Nencasa: Yoqobo / Xylitol
Specification: 365g * 16 iingxowa / CTN (Ezizimeleyo iingxowa ezincinane ngaphakathi)
Iphakheji: Iingxowa zangaphakathi, iibhokisi zangaphandle (malunga neebhokisi ezingama-600 kwisitya se-20GP ngasinye)
Beka ubomi kwishelufa: Iinyanga ezili-12
CukufunyanwaI-HACCP, ISO9001: 2015
Iinkozo ezintlanu zibhekisa kwisame emnyama, isesame emhlophe, ipeanut, imbotyi emnyama kunye nehabile. Ngezixhobo zokuqhubekeka phambili kunye nobuchwephesha obuhle be-biscuit ene-oyile ephantsi, i-Biscuit yethu ye-Grain Biscuit iphantsi emafutheni kwaye iphezulu kwi-calcium kunye nefomathi yesondlo izinto. Abathengi bayatsalwa yinkangeleko yayo entle, uburhabaxa obukrwada kunye nencasa yengqolowa etyebileyo. Kwaye kulula ukuyiphatha kwaye uyigcine ngenxa yeephakeji ezincinci ezizodwa. Kwaye sinako ukuphuhlisa iincasa ezahlukeneyo zolu ngcelele ngokweemfuno zabathengi kunye neemarike, ke ii-odolo ze-OEM zihlala zamkelekile.
UGraham Soda Cracker
Iibhiskithi ezipheleleyo, njengoko igama libonisa, zikwiqebengwana elongezwe ingqolowa yengqolowa, ingqolowa erhabaxa, umgubo wengqolowa kunye nezinye izinto ezingafunekiyo, ukuze umxholo wefibre yokutya yebhiskithi inyuke kakhulu. Kwaye sinako ukuphuhlisa iincasa ezahlukeneyo zolu ngcelele ngokweemfuno zabathengi kunye neemarike. Ukucaciswa okungafaniyo kunye neephakeji ezikhoyo kwiimfuno zakho ezahlukeneyo. Phosa iimfuno zakho, kwaye ezinye zishiyele thina.
Yantai Sanniu Rhweba ngaphakathi & Rhweba ngaphandle, Ltd yindawo yokutya kunye neziselo kunye nenkampani yokupakisha edibeneyo ngaphezulu kweminyaka eli-10.
Igumbi 203, No.310 Zhenzhong St, Isithili Fushan, Yantai, kwiPhondo Shandong, PRC
Ixabiso lesondlo seSesame unama
Izibonelelo zezempilo zepea protein powder
Izibonelelo ezithandathu kunye nezizathu zokuQala ukutya ...
10 eziluncedo iziqhamo enkonkxiweyo
Umsebenzi woKwakha iqela.
Ukutya amandongomane anetyuwa, Iibhiskithi zaBantwana, Ikhukhi yeLadyfinger, Iipakethi zesosi yeSoy, Intonga yeBhontshisi entsha, Umtya weHawthorn,